Sony Xperia 1: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Sony dia namela vaovao be dia be tamin'ny famelabelarany tao amin'ny MWC 2019, araka ny nandrasana. Tamin'ity faran'ny herinandro ity, talohan'ny nanombohan'ny hetsika dia tafaporitsaka fa ny marika Japoney dia hamela antsika hiova lehibe, nanomboka teo novain'izy ireo ny anaran'ireo tandavan'izy ireo an'ny telefaona. Zavatra farany Izy io dia hita miaraka amin'ny farany avo lenta, ny Sony Xperia 1.
Rehefa avy namela anay fitaovana afovoany midadasika, ny marika Japoney izao dia manolotra ny sainany vaovao. Momba ny Sony Xperia 1. Finday iray mahafeno ny andrasana amin'ny fitaovana avo lenta anio. Hery, fampisehoana tsara ary fakan-tsary tsara, toy ny mahazatra ho an'i Sony.
Ny efijery tsy manam-petra izay hitantsika tao amin'ireo fitaovan'izy ireo antonony izay nipoitra indray tamin'ity modely ity. Tampon'entana mahery vaika, izay tadiavin'ilay orinasa hamerenana amin'ny laoniny ny sasany amin'ny tany very tao amin'ny tsenan'ny smartphone tao anatin'ny volana vitsivitsy. Manahirana azy ireo izany, saingy tsy isalasalana fa maodely natao ho azy io.
1 Famaritana Sony Xperia 1
2 Sony Xperia 1: avo lenta iray manontolo
Famaritana Sony Xperia 1
Faly ny maro fa hitantsika fa mbola i Sony manohitra ny notch na ny lavaka eo amin'ny efijery. Tsy mahita an'io fiasa ireto izahay ao amin'ity Sony Xperia 1. efijery elongated ity, misy kalitao tsara sy hery madio ao anatiny. Ireto ny andinindininy feno amin'ny telefaona:
Sony Xperia 1 famaritana ara-teknika
modely Xperia 1
efijery OLED 6.5-inch miaraka amin'ny famaha 4K + sy tahan'ny 21: 9
Fakan-tsary aoriana 12 MP f / 1.6 OIS Pixel Dual + 12 MP f / 2.4 Zoro malalaka + 12 MP f / 2.4 Zo optika OIS
Fakan-tsary aloha 8MP FF
Fitaovana hafa Mpamaky tanan-tànana eo amin'ny lafiny NFC Protection IP68 Dolby Atmos
bateria 3.330 mAh miaraka amina fiampangana haingana
Amin'ity modely ity dia miloka amin'ny tabilao miaraka amin'ny tahan'ny 21: 9 indray izy ireo. Tahaka ireo maodelim-paritra antonony izay, miharihary ny fampihenan'ny orinasa ny bezela amin'ny telefaona. Io dia mamela ity Sony Xperia 1 hahatratra antsika amin'ity efijery tsy manam-petra ity. Tsy misy isalasalana fa safidy lehibe izy io raha ny amin'ny fandaniana atiny multimedia. Ary koa satria nandinika manokana ny feo amin'ny telefaona ny orinasa.
Mahita mpandahateny stereo sasany izahay, ankoatry ny fananana fifanarahana amin'i Dolby Atmos (hita ao amin'ny Netflix, ankoatry ny hafa). Inona no mamela feo miroboka amin'ny fotoana rehetra. Ampahany manan-danja rehefa mandany atiny ao amin'ilay fitaovana.
Sony Xperia 1: avo lenta iray manontolo
Mikasika ny ambiny manokana amin'ny famaritana, dia hitantsika fa io dia tampon'ilay isa. Hitanay ilay processeur izay hitantsika omaly amin'ny fitaovana avo lenta hafa toa ilay LG G8 ThinQ na ny LG V50 5G. Ny processeur izay dia Snapdragon 855, na dia amin'ity tranga ity aza, ny Sony Xperia 1 dia tsy miaraka amin'ny fifanarahana 5G. Tsy iray amin'ireo laharam-pahamehan'ny marika Japoney amin'izao fotoana izao, na toa izany.
Mahita fakan-tsary telo izahay. Io no lasa smartphone voalohany Sony manana fakan-tsary telo ao aoriana. Fampifangaroana karazana sensor telo, 12 MP daholo izy rehetra. Na dia noho io fitambarana io aza ianao dia afaka maka sary mahafinaritra amin'ity Sony Xperia 1. Satria manana fitambarana zoro, zoro malalaka ary telefaona ao amin'ilay fitaovana izahay, izay mampanantena fampisehoana tsara.
Amin'ity modely ity dia iray ihany ny fitambaran'ny RAM sy ny tahiry. Ka tsy ho be ny hieritreretana rehefa mividy telefaona any amin'ny magazay. Ny bateria amin'ity fitaovana ity dia 3.330 mAh, somary lehibe kokoa noho ireo maodeliny antonony. Miara-miasa amin'ny processeur ary mieritreritra fa efijery OLED io, dia mety ho mihoatra ny ampy ho an'ireo mpampiasa izay mividy azy io.
Lafin-javatra iray tadiavin'ny mpampiasa maro ny toerana misy ny sensor capres. Tsy eo amin'ny sisiny io, na eo ambanin'ny efijery. Ao amin'ity Sony Xperia 1 ity, hitantsika amin'ny lafiny iray ny sensor amin'ny rantsantanana. Io no vahaolana nofidian'ny orinasa vokatr'ilay fanitarana ny efijery. Fanapahan-kevitra mety tsy hahaliana ny olona rehetra.
Toy ny efa niseho tamin'ireo maodely roa antonony, ny orinasa tsy nanome fanazavana momba ny fanombohana ny tsena izy ireo. Tsy fantatsika hoe rahoviana no hatsangana izy io na ny vidiny eo amin'ny fivarotana. Afaka manantena ny fampifangaroana ny avo lenta amin'ny resaka RAM sy fitehirizana fotsiny isika.
Ny fantatsika dia azo atao izany mividy an'ity Sony Xperia 1 ity amin'ny loko isan-karazany. Afaka misafidy ny mpampiasa amin'ny: mainty, volondavenona, fotsy ary volomparasy amin'ity marika farany japoney ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Sony Xperia 1: Ny sainam-barika vaovao (Lahatsary)
Nanambara ny vidiny sy ny daty fandefasana azy ao amin'ny Nokia 9 PureView